First Task Is to Ask Nepali by JCPS DEP - Issuu
First Task Is to Ask Nepali
अिभभावकको लािग व्यवहार आफैलाई सोध्नुहोस्
तपाईको स्कूललाई सोध्नुहोस्
के मलाई थाहा छ मेरो बच्चाले स्कूल / बस सेिटं गमा
तपाई व्यवहारको सम्बन्ध\_मा तपाईको अपेक्षाहरूको लािग
कसरी व्यवहार गनेर् अपेक्षा गिरन्छ?
मेरो बच्चालाई िशक्षा िदन के गदैर् हुनुहुन्छ?
के म मेरो बच्चासँग सम्बोधन गनर् आवश्यक पनेर् कुनै
मेरो बच्चालाई झगडामा पनर् निदनको लािग तपाई कसरी
व्यवहार मुद्दाहरूको बारेमा सचेत छु ?
मद्दत गनर् सक्नुहुन्छ? (कुनै व्यवहािरक समस्याहरू स्कूलसँग साझेदारी गनुर्होस्)।
के मैले जेफरसन काउन्टी पिब्लक स्कूलहरू (JCPS)
के मेरो बच्चालाई अनुशासनात्मक कारवाहीबाट बच्नको
िवद्याथीर् सहयोग र व्यवहार हस्तक्षेप पुिस्तका पढेको छु ?
लािग उसलाई के आवश्यक छ भनेर वास्तवमै थाहा छ?
के मलाई व्यवहार उल्लंघन र सम्बिन्धत पिरणामहरू थाहा
सबै िवद्याथीर्हरू राम्रोसँग व्यवहार गछर् न् र सुरिक्षत छन्
छ? (िवद्याथीर् सहयोग र व्यवहार हस्तक्षेप पुिस्तका हेनुर्होस्) भनेर सुिनिश्चत गनर् के गिरदैछ? प्रगितशील अनुशासन भनेको के हो? घरमा, के मसँग स्पष्ट अपेक्षा र पिरणामहरू छन्? के म
एउटा अिभभावकको रूपमा, घरमा सचेत हुन र लागू गनर्
मेरो बच्चालाई उसको छनौटहरूको लािग उत्तरदायी
आवश्यक भएका अनुशासन नीितहरू के हुन्?
बनाउँ छु ?
सकारात्मक व्यवहार हस्तक्षेप र सहयोग (PBIS) के हुन्?
सम्भािवत समस्याहरू छन् भनेर म सचेत भएको अवस्थामा
मलाई तपाईसँग साझेदारी गनर् आवश्यक कुनै पिन कुराको
म स्कूलसँग कुराकानी गनर् कसरी योजना बनाउन सक्छु ?
बारेमा स्कूलसँग कुराकानी गनर्को लािग सबैभन्दा उत्तम
के मसँग स्कूल प्रशासनको फोन नम्बर र ईमेल ठे गानाहरू
तिरका के हो?
छन्? के त्यहाँ कुनै फोन / ईमेल सूची उपलब्ध छ? मेरो बच्चाले िहं सा स्वीकायर् छै न भन्ने महसुस गयोर् भनेर
तपाई िनलम्बनहरूलाई कसरी प्रयोग गनुर्हुन्छ?
िनिश्चत गनर् म के गदैर्छु? के यो अिन्तम उपाय हो? म कसरी घरमा स्कूलको नीित र प्रिक्रयाहरूलाई सहयोग
यिद मेरो बच्चा िनलिम्बत भएको छ भने, के त्यहाँ
गनर् सक्छु ?
अपीलको प्रिक्रया छ
सम्पकर् गनुर्होस् डा. क्याटी डेफेरारी मौसम तथा संस्कृितका लािग सहायक उपरीक्षक भान्होज िशक्षा केन्द्र 485-6266 katy.deferrari@jefferson.kyschools.us
अिभभावकको लािग धम्कीबाट रोकथाम आफैलाई सोध्नुहोस्
आफ्नो बच्चालाई सोध्नुहोस्
के यो धम्की वा साथीहरू बीचको द्वन्द्व हो?
मैले कसरी िभन्नता थाहा पाउन सक्छु ?
म कसरी आफ्नो बच्चालाई बोल्ने कुरामा िवश्वस्त हुन
ितमीलाई मबाट के चािहन्छ?
मद्दत गनर् सक्छु ? पिरिस्थितलाई सम्बोधन गनर् आवश्यक पनेर् सबै जानकारी
कसले ितमीलाई धम्कायो? उनीहरूले के भने वा के गरे? यो
समावेश गनर् म कसरी आफ्नो बच्चालाई मद्दत गनर् सक्छु ?
कहाँ भयो? के त्यहाँ साक्षीहरू िथए? यो किहले देिख भइरहेको छ?
स्कूलमा मैले कसलाई िरपोटर् गनुर्पछर् ?
ितमीले यसको बारेमा स्कूलमा कोसँग कुरा गरेका िथयौ? के ितमीले िरपोटर्को फारम भयौर्ं?
मेरो बच्चाले िवश्वस्त महसुस गनर् मद्दत गनर् मैले के गनुर् पछर्
यसको लािग ितमीलाई मद्दत गनर् मैले के गनर् सक्छु ?
तािक उ वा उनी स्कूलमा सफल हुन सकोस्? मेरो बच्चाको कायर् योजनामा इनपुट हुनेछ भनेर म कसरी
ितम्रो आवश्यकताहरू पूरा भएको छ भनेर िनिश्चत गनर्
िनिश्चत गनर् सक्छु ?
हामीले कसरी कायर् योजनामा ितमीलाई समावेश गनर् सक्छौं?
सम्पकर् गनुर्होस् िक्रस्टल काटर्र सुपरभाइजर धम्की रोकथाम िवभाग स्कूल संस्कृित र वातावरण 485-7551 crystal.carter@jefferson.kyschools.us धम्की रोकथाम संसाधन िशक्षकहरू स्टीभ िगिट्टंग्स 485-6162 िब्रटनी नीप 485-6162 Nepali
अिभभावकको लािग कलेजमा िसिमत खेलाडीहरू आफैलाई सोध्नुहोस्
के मेरो बच्चा कलेजको लािग योग्य छ?
NCAA योग्यता आवश्यकताहरू पूरा गनर् कुन कोर वगर् आवश्यक छ?
के मेरो बच्चाले कलेज जानको लािग SAT / ACT िलनु
के स्कूलले िनःशुल्क SAT / ACT जाँच प्रदान गछर् ?
पछर् ? के मेरो बच्चा SAT / ACT को लािग तयार गिरएको छ?
के तपाई SAT / ACT को लािग तयारी पाठ्यक्रम प्रदान गनुर्हुन्छ?
मेरो बच्चाले SAT / ACT िलने कितवटा अवसरहरू छन्?
स्कूलले किहले िन:शुल्क SAT / ACT जाँच प्रदान गछर् ?
मेरो बच्चाले SAT / ACT को लािग कसरी अध्ययन गनर्
योग्यताको लािग SAT / ACT को अंकमा GPA कारक
सक्छ? के त्यहाँ अभ्यास जाँच वा पाठ्यक्रमहरू छन्?
िक्लयिरं ग हाउस भनेको के हो?
मेरो िवद्याथीर्ले कसरी खेलाडीमा दतार् गछर् र के त्यसको लािग खचर् लाग्छ? 48H फारम के हो? ट्रान्सिक्रप्टहरू कसरी अनुरोध गिरन्छ? प्रिक्रयाको लािग कित समय लाग्छ?
सम्पकर् गनुर्होस् जेरी वाइमन कायर्कारी प्रशासक गितिविध र खेलकुद 485-3331 Jerry.wyman@jefferson.kyschools.us
अिभभावकको लािग गमीर् कायर्क्रम छनौट गनेर् आफैलाई सोध्नुहोस्
स्कूल-बाहेकको-समय (OST) प्रदायकलाई सोध्नुहोस्
मेरो बच्चामा रुिच भएको कायर्क्रम कित सफल छ?
कायर्क्रमले कसरी प्रत्येक बच्चाको प्रगितको मुल्यांकन वा ट्र्याक गछर् ?
के कायर्क्रमको कमर्चारी अनुभवी र राम्रोसँग तािलम प्राप्त छ?
मेरो बच्चासँग काम गनेर् कमर्चारीको सामान्यत: अनुभव के हो? कमर्चारीले कस्तो तािलम पाएको छ?
म मेरो बच्चाको लािग कस्तो िकिसमका गमीर्का गितिविधहरूमा रुिच राख्छु ?
के मेरो बच्चाले शारीिरक व्यायाम, सांस्कृितक संवृिद्धका अवसरहरू, र पढ् ने अभ्यास, गिणत, र अन्य शीपहरूको अवसर प्राप्त गछर् ? के मेरो बच्चालाई उसको गितिविधहरू छनौट गनर् अवसर प्राप्त हुनेछ?
यो कायर्क्रममा सामान्यतया बच्चाहरूले कसरी आफ्नो िदन िबताउँ छन्?
सामान्य िदन / हप्ता कसरी व्यविस्थत गिरन्छ? मेरो बच्चाले कसरी उसको वा उनको समय खचर् गछर् ?
यो कायर्क्रम किहले प्रस्ताव गिरन्छ?
कायर्क्रमको समय र िमितहरू के हुन्?
के यो कायर्क्रम सस्तो छ?
के कायर्क्रमले छात्रवृित वा आिथर् क सहयोग प्रदान गछर् ? यिद हो भने, कोही कसरी योग्य हुन्छ?
के खाना र खाजा प्रदान गिरनेछ?
के कायर्क्रमले स्वस्थवधर्क खाना र खाजा प्रदान गछर् ?
मेरो बच्चासँग कमर्चारीले कसरी कुराकानी गछर् ?
कायर्क्रमले कसरी युवा र कमर्चारी बीच सकारात्मक अन्तिक्रर्या बढावा िदन्छ?
यिद मेरो बच्चाको िवशेष िशक्षा वा शारीिरक आवश्यकता भएमा के हुन्छ?
कायर्क्रमले कसरी बच्चाहरूको िवशेष िशक्षाको आवश्यकताहरू, शारीिरक आवश्यकता वा एलजीर्सँग समायोजन गछर् ?
म मेरो बच्चाको लािग कस्तो प्रकारको कायर्क्रम वातावरण चाहन्छु ?
कायर्क्रमका कमर्चारीहरूले कसरी सुरिक्षत र स्वस्थ वातावरण सुिनिश्चत गछर् न्?
म मेरो बच्चाको गमीर् गितिविधहरूमा कसरी सामेल हुनेछु?
कुन अवसरहरू, यिद कुनै छन् भने, अिभभावकहरू संलग्न हुनका लािग उपलब्ध छन्?
के मेरो बच्चा क्षेत्र भ्रमण अवसरहरूमा भाग िलनेछ? यिद हो भने, त्यहाँ कुनै खचर् छ?
के कायर्क्रमले थप लागतमा िफल्ड िट्रपहरू प्रदान गछर् ? यिद हो भने, यसको खचर् कित लाग्छ?
के त्यहाँ आवेदन प्रिक्रया र कायर्क्रमको लािग अिन्तम िमित छ?
मैले मेरो बच्चाको लािग किहले र कसरी कायर्क्रममा भाग िलनको लािग आवेदन िदन सक्छु ?
सैिलना आर. िफशब्याक
िनदेर्शक, लुइसिभल िशक्षक िनवास
िविवधता, समता, र गरीबी कायर्क्रमहरू
3332 न्युबगर् रोड
अिभभावकको लािग पाठ्यक्रम आफैलाई सोध्नुहोस्
के मलाई यो स्कूल वषर्मा मलाई के िसकाउने हो भनेर थाहा
मैले िसक्नुपनेर् कुरा िसकेको िनिश्चत गनर्को लािग तपाई के
के म मेरो शिक्त र कमजोरीहरूको बारेमा सचेत छु ?
मेरो शिक्त र कमजोरीहरूको बारेमा तपाई मसँग कसिर र किहले कुराकानी गनुर्हुन्छ?
के मलाई गृहकायर् नीित थाहा छ?
हाम्रो गृहकायर् नीित के हो?
घरमा, के मसँग मेरो लािग उमेर उपयुक्त स्पष्ट अपेक्षाहरू,
हाम्रो कक्षाकोठाका िनयमहरू, अपेक्षाहरू, र पुरस्कार के-के
पिरणामहरू, र िजम्मेवािरहरू छन्?
हुन्? स्कूलका िनयमहरू, अपेक्षाहरू, र पुरस्कार के-के हुन्?
म आफ्ना िशक्षकहरूसँग कसरी कुराकानी गनेर्छु?
मेरो लािग स्कूलको काम, स्कूल समस्या, वा घरका मुद्दाहरूको लािग मद्दत चािहएमा तपाईलाई थाहा िदने स्वीकायर् तिरका के हो?
कस्ता संवधर्न र िवस्तािरत िशक्षा अवसरहरू मेरो
लािग उपलब्ध छन्?
के म कलेज र / वा क्यािरयर तत्परताको लािग सही मागर्मा छु ?
म कलेज र / वा क्यािरयर तत्परताको लािग सही मागर्मा छु भनेर म म कसरी जान्न सक्छु ?
व्यवहार व्यवहािरक समस्या आउँ दा के मसँग आवाज छ?
के म कथाको मेरो पक्ष बताउन पाउनेछु?
धम्कीको कुरा आउँ दा मैले के गनेर्?
हाम्रो स्कूल धम्कीमुक्त बनाउनको लािग म के गनर् सक्छु ?
उपलिब्ध के म ग्रेड-स्तर अपेक्षाहरू मािथ काम गदैर्छु?
के म प्राथिमक प्रितभा पुल वा अिग्रम कायर्क्रमको लािग स्क्रीिनं ग गिरएको छु ?
मैले प्राथिमक प्रितभा पुल वा अिग्रम कायर्क्रमको लािग
मापदण्ड पूरा गरें। यसको मतलब के हो?
मापदण्ड पूरा गरें। यसको मतलब के हो? मेरो छनौटहरू के-के हुन्?
सम्पकर् गनुर्होस् डा. कामेर्न कोलम्यान मुख्य शैिक्षक अिधकृत 485-3476 carmen.coleman@jefferson.kyschools.us
अिभभावकको लािग भावनात्मक स्वस्थता आफैलाई सोध्नुहोस्
आफ्नो िशक्षकलाई सोध्नुहोस्
के मेरो बच्चाले मलाई उनीहरूको िवचार र भावना व्यक्त गिररहेका छन्? स्कूलमा हुँ दा मेरो बच्चाको मुड कस्तो छ?
स्कूलमा हुँ दा मेरो बच्चाको मुड कस्तो छ?
के मेरो बच्चाले मृत्यु वा अलिग्गनु जस्ता महत्वपूणर् हानीको सामना गरेको छ?
के मेरो बच्चाले स्कूलमा िवश्वसनीय वयस्कहरूसँग कुरा गछर् ? वयस्क को हो?
के मेरो बच्चाले सम्बन्ध िवच्छे द, दुरुपयोग, पदाथर्को दुरुपयोग, घरेलु िहं साको साक्षी, घरबारिवहीन, लगातारको स्थानान्तरण, समुदाियक िहं सा जस्ता आघातको अनुभव गरेको छ?
आघातको जानकारीमा हेरचाहको बारेमा कमर्चारीलाई कसरी िशक्षा िदइन्छ?
भावनात्मक स्वस्थताको लािग मद्दत पुर्‍याउन स्कूल र समुदायमा के सहयोगहरू उपलब्ध छन्?
आघातमा परेका िवद्याथीर्हरूसँग सम्बिन्धत कमर्चारी सदस्यहरूले कसरी व्यवहार गिररहेका छन्?
म कसरी स्कूल र समुदायका सहयोगहरूमा पहुँ च गनर् सक्छु ?
मानिसक स्वास्थ्य सहयोगको आवश्यकता भएका िवद्याथीर्हरूलाई पिहचान गनेर् प्रिक्रया के हो?
के त्यहाँ िनन्द्रा, व्यायाम, पोषण जस्ता भावनात्मक स्वस्थतालाई पोषण, व्यायाम, र िनन्द्रा जस्ता सकारात्मक जीवनशैली मद्दत गनर् सक्ने जीवनशैलीमा कुनै पिरवतर्नहरू छन्? पिरवतर्नहरूको जानकारी िदन र प्रोत्साहन गनर्को लािग के गिरन्छ? के मेरो बच्चा स्कूलको अविधमा वा पिछ रमाइलो गितिविधहरूमा संलग्न भइरहेको छ? के मेरो बच्चाले समय िबताउने साथीसँग राम्रो सम्बन्ध छ?
के मेरो बच्चाको स्कूलमा सकारात्मक साथीका सम्बन्धहरू छन्?
मेरो बच्चाको रुिच, प्रितभा, र शिक्तहरू के-के हुन्?
के तपाईलाई मेरो बच्चाको रुिच, प्रितभा, र शिक्तहरू थाहा छ?
के मेरो बच्चाको आधारभूत आवश्यकताहरू हाल पूरा भइरहेको छ (खाना, कपडा, आश्रय, िचिकत्सा)?
मेरो बच्चाको आधारभूत आवश्यकताहरू प्रदान गनर् सहयोग पुर्‍याउन स्कूल वा समुदायमा कुन स्रोतहरू उपलब्ध छन्?
सम्पकर् गनुर्होस् ब्रूक: 502-896-0495 L शािन्त को U: 502-451-3333 सेन्टरस्टोन संकट लाइन: 502-589-8070 यिद तपाईलाई आफ्नो बच्चाको मानिसक स्वास्थ्यको बारेमा गम्भीर िचन्ताहरू छन् र ितनीहरू आफैलाई वा अरूको लािग खतरा हुनसक्छ भन्ने लागेमा, कृपया आफ्नो बच्चाको स्कूल वा िनम्न एजेन्सीहरू मध्ये एकमा सम्पकर् गनुर्होस्: Nepali
अिभभावकको लािग भावनात्मक स्वस्थता तपाईको िवद्याथीर्लाई सोध्नुहोस्
के त्यहाँ ितमी दु:खी हुनुको कुनै कारण छ?
के म मेरो िवद्याथीर् दु:खी वा उदास छ भनेर िनधार्रण गनर् सक्षम छु ?
ितमी िचिन्तत हुँ दा, तपाईलाई शान्त हुन के चीजले मद्दत
िवद्याथीर्हरू दु:खी हुँ दा मैले कसरी प्रितिक्रया िदनुपछर् ? मैले
कुन सामना गनेर् कला / नमुना िसकाउँ दैछु?
घरमा ितमी कुन वयस्कसँग कुरा गनर् / गनर् सक्छौ?
के मेरो अिभभावक वा संरक्षकहरूसँग सकारात्मक सम्बन्ध छ?
स्कूलमा ितमीले िवश्वास गनेर् वयस्क को हो?
म कसरी स्कूल र समुदायका सहयोगहरूमा पहुँ च गनर्
िवद्याथीर्ले वयस्कसँग कसरी सम्बन्ध राख्छ? कुन
ितम्रो सबैभन्दा भरपदोर् साथी को हो?
के िवद्याथीर्को साथीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध छ?
ितम्रो प्रितभा र रुिचहरू के-के हुन्?
िवद्याथीर्लाई प्रदशर्न गनर् स्कूलमा के अवसरहरू छन्
ितमीले दु:खी महशुस गदार् ितम्रो शरीरले कस्तो महसुस
के म िवश्वव्यापी िस्क्रनरहरू पुरा गछु र् र सामािजक-
भावनात्मक िसकाईको िनदेर्शन प्रदान गछु र् ?
ितमीले आफ्नो वा अरुको लािग िचन्ता गदार् कोसँग कुरा
िवद्याथीर्हरूको लािग परामशर् सेवाहरूमा पहुँ चको लािग
गनेर् भन्ने कुरा ितमीलाई थाहा छ?
स्कूल वा समुदायमा कुन स्रोतहरू उपलब्ध छन्?
यिद िवद्याथीर् आफ्नो वा अरूको लािग खतरा हो भनेर तपाई िवश्वास गनुर्हुन्छ भने, कृपया स्कूलको मानिसक स्वास्थ्य वा स्कूलको परामशर्दातासँग तुरून्त भेट्नुहोस् सम्पकर् गनुर्होस् ब्रूक: 502-896-0495 L शािन्त को U: 502-451-3333 सेन्टरस्टोन संकट लाइन: 502-589-8070 Nepali
अिभभावकको लािग संलग्नता आफैलाई सोध्नुहोस्
मलाई थाहा छ मेरो बच्चालाई यस स्कूल वषर्मा के पढाउनु
मेरो बच्चाले उसले वा उनले िसक्नुपनेर् कुरा िसिकरहेको
कुरा सुिनिश्चत गनर् तपाईहरूले के गदैर् हुनुहुन्छ?
के म मेरो बच्चाको शिक्त र कमजोरीहरू बारे सचेत छु ?
मेरो बच्चाको बारेमा के हुँ दैछ भनेर मलाई जानकारी िदन तपाई मसँग कसरी र किहले कुराकानी गनुर्हुन्छ?
के मेरो बच्चालाई उसले वा उनले कामको प्रत्येक अंशमा शीषर् ग्रेडहरू प्राप्त गनर् के आवश्यक छ भनेर थाहा छ?
के मेरो बच्चालाई फाइदा पुर्‍याउने स्कूलमा भएको कुनै
सबै िवद्याथीर्हरू कठोर कक्षा र पाठहरूमा सामेल छन् भनेर
कायर्क्रम वा श्रोतहरूको ज्ञात छ? यी कायर्क्रमहरूमा
सुिनिश्चत गनर् के भइरहेको छ?
नामांकनको लािग के प्रिक्रया छ? घरमा, के मसँग मेरो बच्चाको उमेरको लािग उपयुक्त स्पष्ट एउटा अिभभावकको रूपमा, घरमा सचेत हुन र लागू गनर् अपेक्षाहरू, पिरणामहरू, र िजम्मेवारीहरू छन्?
म कसरी िशक्षकहरूसँग कुराकानी गनेर् योजना बनाउन
मेरो बच्चाको स्कूलहरूमा स्वयंसेवा गनर् मलाई के
अवसरहरू उपलब्ध छन्?
समुदायमा कुन समृिद्ध र िवस्तािरत-िशक्षण अवसरहरू मैले मेरो बच्चा कक्षामा अरुसँग कसरी कुराकानी गछर् ? मेरो बच्चामा प्रकट गिररहेको छु ? मैले घरमा िशक्षकलाई कसरी सहयोग गनर् सक्छु ?
यिद मेरो बच्चा पछािड पिररहेको छ भने, तपाईहरू उसलाई वा उनलाई कक्षाको स्तरमा राख्नको लािग कुन प्रवेगको अवसरहरू प्रदान गनुर्हुन्छ?
सम्पकर् गनुर्होस् डा. भेनेसा एम. म्याकिफल िवशेषज्ञ, सामुदाियक मािमला िविवधता, समता, र गरीबी कायर्क्रमहरू LAM िबिल्डङ 4309 िवशोप लेन, कायार्लय 221 485-3631 vanessa.mcphail@jefferson.kyschools.us Nepali
अिभभावकको लािग पालन स्याहार आफैलाई सोध्नुहोस्
के यो मेरो बच्चा स्कूलमा रहनु उसको / उनको सवोर्त्तम हीतमा छ?
तपाई मेरो बच्चालाई कसरी उसको / उनको हालको स्कूलमा राख्न
के मैले सामािजक कायर्कतार्सँग यसको बारेमा छलफल गरेको
कसरी मद्दत गनर् सक्नुहुन्छ? के यातायात उपलब्ध छ?
छु ? के िवद्याथीर्हरूलाई स्कूल पिरवतर्न गनर्को लािग सवोर्त्तम हीतको
तपाई कसरी मेरो बच्चालाई उसको / उनको नयाँ स्कूलमा तुरुन्त दतार्
िनधार्रण गिरएको छ?
गराउन सहयोग गनर् सक्नुहुन्छ?
यिद मेरो बच्चाले स्कूलहरू पिरवतर्न गनुर्परेमा, के शैिक्षक राहदानी पूरा भएमा स्कूलमा प्रस्तुत गिरन्छ?
के तपाईले शैिक्षक पासपोटर् पूरा गरेर यसलाई सामािजक
के मेरो बच्चा शैिक्षक लक्ष्यमा छ? के मेरो बच्चाको IEP वा 504
के हामी मेरो बच्चाको शैिक्षक आवश्यकताहरू र उपलब्ध सेवाहरूको
बारेमा छलफल गनर् बैठक िमलाउन सक्छौं? IEP वा 504 योजना
कायर्कतार्लाई प्रदान गनुर्भयो?
कसरी कायार्न्वयन भइरहेको छ? मेरो जानकारीमा समस्याहरू आएमा मैले स्कूलसँग कुराकानी गनेर् योजना कसरी बनाउन सक्छु ? के मेरो बच्चालाई स्कूलमा फाइदा पुर्‍याउने कुनै कायर्क्रम वा श्रोतहरूको बारेमा मलाई थाहा छ?
मलाई तपाईसँग साझेदारी गनर् आवश्यक कुनै पिन कुराको बारेमा स्कूलसँग कुराकानी गनर्को लािग सबैभन्दा उत्तम तिरका के हो? मेरो बच्चालाई सामािजक / भावनात्मक आवश्यकताहरूको साथै शैिक्षक आवश्यकताहरूका लािग कुन कायर्क्रमहरू उपलब्ध छन्?
के मेरो बच्चालाई स्कूल पिछको / अितिरक्त पाठ्यक्रम
मेरो बच्चाको लािग कस्ता अितिरक्त पाठ्यक्रम गितिविधहरू
गितिविधहरूमा कुनै रुिच छ?
के मेरो बच्चालाई नयाँ प्लेसमेन्टमा समायोजन गनर् वा जैिवक
के स्कूलले कुनै परामशर् सेवाहरू प्रदान गछर् वा मेरो बच्चाले
पिरवारबाट अलग्याउन किठनाई भइरहेको छ?
भोिगरहेको भावनात्मक किठनाइको बारेमा कुरा गनर् त्यहाँ कुनै व्यिक्त छ?
के मेरो बच्चा कलेज जान चाहन्छ? के मेरो बच्चाले कलेजका िवकल्पहरू र सान्दिभर् क कागजहरू सम्बन्धी छलफल गनर् स्वतन्त्र रुपमा बसेका समन्वयकतार् वा परामशर्दातालाई भेटेको छ?
उत्तर-माध्यिमक िशक्षामा भनार् हुन िवद्याथीर्हरूलाई सहयोग गनेर् के
के मेरो बच्चा पदोन्नित ितर प्रगित गिररहेको छ? के म प्रगित अनुगमन गनर् प्यारेन्ट पोटर्लको जाँच गिररहेको छु ?
म प्यारेन्ट पोटर्लमा कसरी पहुँ च गनर् सक्छु ?
मेरो बच्चाको उपिस्थित कस्तो छ? के मैले अदालतको िमितहरू, बाल कल्याण बैठकहरू, आिद सम्बन्धी बिहष्कृत अनुपिस्थितहरूको लािग कागजमा काम गरेको छु ?
बाल कल्याणसँग सम्बिन्धत अनुपिस्थितहरू बिहष्कृत छन् भनेर
के मेरो बच्चाले कुनै औषिधको सेवन गछर् वा स्कूल सचेत हुनुपनेर् कुनै
म मेरो बच्चाको औषिध / िवशेष स्वास्थ्य आवश्यकताहरूको बारेमा
िवशेष स्वास्थ्य आवश्यकताहरू छन्?
कोसँग कुरा गनर् गछु र् ?
सेवाहरू तपाई प्रदान गनुर्हुन्छ?
सुिनिश्चत गनर् कुन कागजी कायर्हरू आवश्यक छ?
सम्पकर् गनुर्होस् िलन्ड् से बेयल पालन स्याहार सम्पकर् सौन्सीमा स्याटेलाइट कायार्लय 4018 W. माकेर्ट स्ट्री. वेस्ट िवं ग 485-6358
अिभभावकको लािग आफैलाई सोध्नुहोस् के मेरो बच्चाले ग्रेड-स्तर अपेक्षाहरू भन्दा मािथ काम गिररहेको छ?
आफ्नो िशक्षकलाई सोध्नुहोस् के मेरो बच्चा उसको वा उनको हालको स्कूलमा प्राथिमक प्रितभा पूल वा प्रितभाशाली कायर्क्रमको लािग स्क्रीिनं ग गिरएको छ? मेरो बच्चाको व्यिक्तगत आवश्यकताहरू पूरा गनर् फरक गितिविधहरू गनर्
मेरो बच्चाले मापदण्ड पूरा गर्‍यो र प्राथिमक प्रितभा पुल वा प्रितभाशाली सेवाहरूमा छ। यसको मतलब के हो?
के गिरदैछ? के मेरो बच्चा स्कूलमा भिवष्यको समस्या समाधान, िछटो पुन:कल, बीटा क्लब, र रािष्ट्रय सम्मान सोसाइटी जस्ता सम्वधर्न अवसरहरूमा संलग्न छ? यी कायर्क्रमहरूमा जानको लािग के प्रिक्रयाहरू छन्? मेरो बच्चाले प्राथिमक प्रितभा पुल वा प्रितभाशाली कायर्क्रममा उसको
के मलाई िवस्तृत कायर्क्रम र प्रितभाशाली कायर्क्रम बीचको फरक थाहा छ?
सहभािगताको कारण स्कूलमा उसको वा उनको अनुभव कसरी फरक हुन सक्छ?
घरमा, के मेरो बच्चाको सामािजक र भावनात्मक आवश्यकताहरू सम्बोधन गनर्को लािग मसँग स्पष्ट अपेक्षाहरू, पिरणामहरू, र िजम्मेवारीहरू छन्?
मैले कसरी मेरो बच्चाको िशक्षकहरूसँग कुराकानी गनेर् योजना बनाउन सक्छु ?
म मेरो बच्चामा एक प्रितभाशाली िवद्याथीर् सेवा योजना किहले प्राप्त गनेर्छु? मेरो बच्चाको सामािजक र भावनात्मक आवश्यकताहरू पूरा गनर् मैले कुन संरचनाहरू बनाउनु पछर् ? उसले वा उनले साथीहरुसँग कसरी प्रितिक्रया गछर् ? के मेरो बच्चाको उही उमेरका साथीहरू छन्? मेरो बच्चाको स्कूलमा स्वयंसेवा गनर्को लािग मलाई कस्ता अवसरहरू उपलब्ध छन्? मेरो बच्चाको प्रगितको सम्बन्धमा तपाईंलाई सम्पकर् गनर्का लािग मलाई उत्तम मागर् के हो?
मेरो उन्नत बच्चाको लािग समुदायमा कुन सम्वधर्नका अवसरहरू उपलब्ध
उन्नत िवद्याथीर्हरूका लािग मेरो समुदायमा कुन बाह्य गितिविधहरू
उपलब्ध छन्? के तपाई मलाई सम्पकर् जानकारी प्रदान गनर् सक्नुहुन्छ? मेरो बच्चालाई ग्रेड स्तरभन्दा मािथ राख्ने प्रयासको लािग, मैले आफ्नो
म कसरी घरमा मेरो बच्चाको उच्च-स्तरका क्षमताहरूलाई सहयोग गनर् सक्छु ? बच्चाको सम्भावनालाई प्रोत्सािहत गनर् कुन सम्वधर्न गितिविधहरू प्रदशर्न गनर् सक्छु ? मैले घरमा कसरी िसक्न सहयोग गनर् सक्छु ?
सम्पकर् गनुर्होस् अिग्रम कायर्क्रम / प्रितभाशाली कायार्लय 485-7424 askadvanceprogram@jefferson.kyschools.us
अिभभावकको लािग िवकासको मानिसकता आफैलाई सोध्नुहोस्
के मलाई िवकासको मानिसकता भनेको के हो भन्ने थाहा
के मलाई मेरो बच्चाको स्कूलमा िवकासको मानिसकता
के सबै िशक्षकहरू वयस्कहरूको िवश्वासमा परावतर्न र
रणनीितहरू प्रयोग हुन्छ िक हुँ दैन भन्ने थाहा छ?
छलफलहरू समावेश गदैर् िवकासका मानिसकको प्रयासमा तािलम प्राप्त छन्?
मेरो बच्चालाई प्रितिबिम्बत गनर् प्रेिरत गनर्को लािग उसलाई के तपाई िवकासको मानिसकतामा पेशेवर तािलम प्रदान वा उनलाई म कुन प्रश्नहरू सोध्न सक्छु ?
के मलाई िवकासको मानिसकता वृिद्ध गनेर् तिरकाहरू थाहा यो स्कूलमा तपाई कसरी िवकासको मानिसकतालाई छ?
प्रोत्साहन िदनुहुन्छ, र म - अिभभावकको रूपमा - घरमा कसरी यसलाई सहयोग गनर् सक्छु ?
के मेरो बच्चाको कडा मेहनतको लािग गिरने प्रशंसाले
तपाईको कक्षाकोठामा कुन िवकासको मानिसकता
िवकासको मानिसकतालाई सहयोग गछर् ?
रणनीितहरू प्रयोग गनुर्हुन्छ?
के मेरो बच्चाले आलोचनाबाट िसक्छ?
मानिसकता वृिद्ध गनेर् सम्बिन्ध अन्य स्रोतहरू म कहाँ पाउन सक्छु ?
के मेरो बच्चाले प्रितिक्रयालाई िसक्ने अवसरको रूपमा
घरमा मैले मेरो बच्चाको मानिसकता वृिद्ध सम्बिन्ध कुन
पक्षहरूमा काम गनर् आवश्यक छ?
िस्थर मानिसकता : तपाईका शीप र बुिद्धमता िस्थर गुणहरू हुन् र तपाईमा ितनीहरू मध्ये धेरल ै ाई सुधार गनेर् क्षमता छै न भनेर तपाई िवश्वास गनुर्हुन्छ। तपाई एक िनिश्चत बुिद्धमताको साथमा जिन्मनुभएको छ र यसलाई पिरवतर्न गनर्को लािग धेरै गनर् सक्नुहुन्न। वृिद्ध मानिसकता : तपाईको शीप र बुिद्ध सुधार गनर् सिकने चीजहरू हुन् - तपाईसँग िसक्ने क्षमता छ भनेर तपाई िवश्वास गनुर्हुन्छ। शीपहरू प्रयासको माध्यमबाट बनाइएको हो, र सबैले पिरवतर्न गनर् सक्छन्। कािडर् ड्वेकको पुस्तक मानिसकता : सफलताको नयाँ मनोिवज्ञान बाट पिरमािजर् त
घरबारिवहीन िशक्षा आफैलाई सोध्नुहोस्
म्यािकन्नी-भेन्टो अन्तगर्तका सेवाहरूको बारेमा मैले कुन
योग्य पिरवारहरूलाई सहयोग पुर्‍याउन कस्तो शैिक्षक
प्रश्नहरू सोध्नुपछर् ?
अिधकार र सेवाहरू उपलब्ध छन्?
के मैले पिरवार म्यािकन्नी-भेन्टो सेवाहरूको लािग कसरी
संक्रमणमा पिरवारका लािग िजल्लाको सम्पकर् को हो? म
योग्य हुन्छ भनेर पूणर् रूपमा बुझेको छु ?
कसरी सेवाहरूमा पहुँ च गनर् सक्छु ?
मैले कसरी मेरो बच्चाको लािग शैिक्षक िस्थरता र
मेरो बच्चा उही स्कूल (मूल स्कूल) मा रहनको लािग कुन
िनरन्तरतालाई सहयोग गनर् सक्छु ?
यातायात उपलब्ध छ?
के मलाई संक्रमण िजल्लामा बस्ने पिरवारहरूको लािग
यिद मेरो बच्चाले स्कूलहरू पिरवतर्न गरेमा, कसले
स्कूल िजल्लामा उपलब्ध श्रोतहरूको बारेमा थाहा छ?
हामीलाई िछटो रेकडर्हरू स्थानान्तरण गनर् मद्दत गछर् ?
यिद म भुक्तानी गनर् सक्दैन भने मेरो बच्चा कसरी कक्षाको
मेरो बच्चाले स्कूलमा िन:शुल्क भोजन कसरी प्राप्त गनर्
िफल्ड िट्रपमा जान सक्छ वा अन्य स्कूल गितिविधहरूमा
सक्छ? यिद आवश्यक भएमा मेरो बच्चाले िन:शुल्क
भाग िलन सक्छ?
आपूितर् कसरी प्राप्त गनर् सक्छ?
सम्पकर् गनुर्होस् िगजेल डेन्जर-मकेर्डेिरस पहुँ च र अवसरको िवशेषज्ञ िवद्याथीर् समता र समुदाय संलग्नता 485-3560 giselle.danger-mercaderes@jefferson.kyschools.us
अिभभावकको लािग अल्पसंख्यक वा मिहला व्यवसाय उद्यम (MWBE)
MWBE को कायार्लयलाई सोध्नुहोस्
के मलाई अल्पसंख्यक वा मिहला व्यवसयको रूपमा
अल्पसंख्यक व्यवसाय उद्यम (MBE), मिहला व्यापार उद्यम
प्रमािणत गिरएको छ?
(WBE), वा गैर-लाभािन्वत व्यवसाय उद्यम (DBE) को रूपमा प्रमािणकरणले के मेरो कम्पनीलाई नयाँ व्यापार प्राप्त गनर् मद्दत गछर् ?
मेरो प्रितस्पधार्त्मक लाभ के हो?
अल्पसंख्यक- वा मिहला स्वािमत्वको व्यवसाय वा गैरलाभािन्वत व्यवसायको रूपमा, मेरो कम्पनी JCPS सँग कसरी काम गछर् ?
म जेफरसन काउन्टी पिब्लक स्कूलहरू (JCPS) सँग िमल्दो
म िनमार्ण करारमा भाग िलन चाहेको MWBE हुँ ।
कुन उत्पादन वा सेवा प्रस्ताव गछु र् ?
सम्झौताहरू बोलपत्र हुनेछ वा बोली लगाइनेछ भनेर म कसरी पत्ता लगाउन सक्छु ?
के मेरो उप-ठे क्का कायर्हरूमा MWBE मा समावेश गनेर्
एउटा MWBE को उपयोग गनर्को लािग एक राम्रो
िवश्वासको गठनले के योगदान िदन्छ?
सम्पकर् गनुर्होस् डेलक्वान डोसीर् समुदाय संलग्नता समन्वयक भ्यानहुज िशक्षा केन्द्र, तेस्रो तल्ला 485-3655 Delquan.dorsey@jefferson.kyschools.us
अिभभावकको लािग जातीय समता नीित आफैलाई सोध्नुहोस्
के मलाई जातीय समता नीित भनेको के हो भनेर थाहा छ?
जातीय समता िवश्लेषण प्रोटोकल (REAP) को माध्यमले स्कूलले कुन नीित / अभ्यासहरू िलएको छ?
के मलाई िकन हामीलाई जातीय समता नीित चािहयो भनेर तपाईको कक्षाकोठामा तपाईले कुन सांस्कृितक दक्षता थाहा छ?
िशक्षण रणनीितहरू प्रयोग गिररहनु भएको छ?
के मलाई जातीय समता स्कूल योजनाहरू कहाँ फेला पानेर्
के स्कूल भवनका सबै िशक्षकहरूले समता संस्थाबाट
भनेर थाहा छ?
तािलम प्राप्त गरेका छन्?
म जातीय समता नीितको बारेमा थप जानकारी कहाँबाट
िविवध जनसंख्याको सेवामा प्रभावकािरता सुधार गनर्
पाउन सक्छु ?
तपाईले के तािलमहरू प्राप्त गनुर्भएको छ?
म कसरी मेरो बच्चाको लािग स्कूलको जातीय समता
तपाई कसरी थप समावेशी हुन पाठ्यक्रम बढाउँ दै हुनुहुन्छ?
स्कूल योजनालाई सहयोग गनर् सक्छु ? जातीय समता नीितको िवषयमा म तथ्यांक कहाँ पाउन सक्छु ?
सम्पकर् गनुर्होस् ड्वेन िविलयम्स जातीय समता िवशेषज्ञ भ्यानहुज िशक्षा केन्द्र, तेस्रो तल्ला 3332 न्युबगर् रोड 502-485-3620 Dwan.Williams@jefferson.kyschools.us
अिभभावकको लािग पुनस्थार्पना अभ्यासहरू आफैलाई सोध्नुहोस्
के म जेफरसन काउन्टी पिब्लक स्कूलहरू (JCPS) िवद्याथीर् पुनस्थार्पना अभ्यासहरू के हुन्? सहयोग र व्यवहार हस्तक्षेप पुिस्तकाको पुनस्थार्पना अभ्याससँग पिरिचत छु ? के मलाई यिद मेरो बच्चाको स्कूलमा पुनस्थार्पनाका
यो स्कूलमा िवशेष गिर कुन पुनस्थार्पना अभ्यासहरू प्रयोग
अभ्यासहरू प्रयोग भएको छ िक छै न भन्ने बारेमा थाहा छ?
के म कुन पुनस्थार्पना अभ्यासहरू उिचत प्रितिक्रया हुन्
के सम्बन्ध पुनस्थार्पना अभ्यासहरू िनलम्बन प्रयोग
भनेर सचेत छु ?
गिरएको भए तापिन प्रयोग गिरनेछ?
के म मेरो बच्चालाई व्यवहार र अनुशासन मुद्दाहरूद्वारा
के सबै िशक्षकहरू उिचत कक्षाकोठामा पुनस्थार्पना
क्षितग्रस्त सम्बन्धहरू ममर्त गनेर् दाियत्व हुन्छ भनेर
अभ्यास प्रयोग गनर् तािलम प्राप्त छन्?
िसकाउँ छु ? तपाई कसरी मेरो बच्चालाई द्वन्द्व सुल्झाउने राम्रो उपायहरू फेला पानर् मद्दत गनर् सक्नुहुन्छ? के म िवद्यालयमा द्वन्द्वको लािग पुनस्थार्पना अभ्यासहरू
िवद्यालयमा आधािरत द्वन्द्व समाधान गनर् पुनस्थार्पना
पयार्प्त प्रितिक्रया हुन् भनेर िवश्वास गछु र् ?
अभ्यासहरू कित प्रभावकारी छन्?
अिभभावकको लािग सुरक्षा र वातावरणीय आफैलाई सोध्नुहोस्
म मेरो बच्चाको स्कूलमा सुरक्षालाई प्राथिमकतामा जोड
मेरो बच्चाले स्कूलमा कुन सुरक्षा प्रिक्रयाहरू िसकेको छ?
िदने कुन संकेतहरू देख्छु ? के मलाई मेरो बच्चाको स्कूलमा िहं स्रक अपराधको
स्कूलमा अपराध र िहं साको बारेमा मैले फेला पारेको
जानकारी कहाँ फेला पानर् सक्छु भनेर थाहा छ, र मैले
जानकारी मैले किहले र कोसँग छलफल गनर् सक्छु ?
जानकारी कसैसँग छलफल गरेको छु ? स्कूलमा खतरनाक हितयार भेिटएमा स्कूलले कसरी मलाई यिद स्कूलमा खतरनाक हितयार फेला परेको छ भने मलाई सम्पकर् गछर् ?
सम्पकर् गनेर् प्रिक्रयाहरू के हुन्?
यिद स्कूलमा आपतकालीन अवस्था भएमा स्कूल
जब म मेरो बच्चालाई आपतकालीन घटनाको बेलामा िलन
कमर्चारीहरूले िवद्याथीर्हरूलाई कसरी छोड् छन् भनेर
आउं छु , मैले कुन कागजातहरू ल्याउनुपछर् ?
उनीहरूले मलाई भनेका छन्? मैले मेरो बच्चालाई आएको धम्कीको िरपोटर् कसलाई गनेर्? मेरो बच्चाले स्कूलमा धम्कीको खबर कसलाई िदनु पछर् ? के मलाई मेरो बच्चाले स्कूलमा अभ्यास गनेर् सुरक्षा
तपाईले कित पटक आपतकालीन अभ्यास (उदाहरणका
िड्रलहरूको बारेमा थाहा छ?
लािग आगो, चक्रवात, भूकम्प, लकडाउन) को अभ्यास गनुर्हुन्छ?
के मैले स्कूल िभत्र वा बािहर देखेको स्कूलको खतराहरूको मैले स्कूलमा देखेको जोिखमको बारेमा कसलाई िरपोटर् बारेमा िरपोटर् गरेको छु ?
सम्पकर् गनुर्होस् स्ट्यान मलेन िनदेर्शक, सुरक्षा र अन्वेषण 485-3121 stan.mullen@jefferson.kyschools.us
अिभभावकको लािग िवद्यालयमा आधािरत िनणर्य िलने (SBDM) पिरषद - िनणर्य िलएको जानकारी आफैलाई सोध्नुहोस्
तपाईंको प्रधानाध्यापक / अध्यक्षलाई सोध्नुहोस्
के मसँग पिरषदको बैठकहरू भन्दा पिहले सूिचत गनेर् िनणर्यहरू गनर्
के तपाईले मलाई बैठकको एजेन्डाको एक प्रित, अनुमोिदत गनर् बाँकी
आवश्यक जानकारीमा पहुँ च छ?
माइनुट, र त्यो बैठक अिघ हाम्रो बैठकमा छलफल / अनुमोदन गिरने कुनै पिन कागजातहरू ईमेल गनर् सक्नुहुन्छ?
के मसँग पिरषदको उपिनयम बमोिजम र नीितहरूको हालको
के उपिनयम र नीितहरू अध्याविधक छन्? यिद छै न भने, उनीहरूले
िवद्याथीर् उपलिब्धलाई प्रोत्साहन िदनको लािग उपिनयमहरू र नीितहरू अध्याविधक गनेर् के योजना छ?
म कसरी मेरो भूिमका समूहमा पिरषदको जानकारी सञ्चार गनेर्छु?
सरोकारवालाहरूलाई यी नीितहरूमा िनिहत जानकारी कसरी सूिचत गिरन्छ?
के मसँग हालैको राज्य पिरक्षण तथ्यांकमा पहुँ च छ?
राज्यको परीक्षा तथ्यांक पिरषदमा कसरी र किहले प्रस्तुत हुन्छ?
के पिरषदले यसको िनणर्य सूिचत गनर् जारी उत्तरदाियत्व तथ्यांक (राज्य
पिरषदमा कुन उत्तरदाियत्व तथ्यांक िनयिमत रुपमा प्रस्तुत गिरन्छ?
परीक्षण तथ्यांक बाहेक) छलफल / िवश्लेषण गछर् ? के मलाई हाम्रो हालको बृहत स्कूल सुधार योजना (CSIP) मा कसरी
पिरषदले CSIP को कायार्न्वयनको अनुगमन कसरी गनेर्छ?
पहुँ च गनेर् भनेर थाहा छ? म कसरी हाम्रो हालको बजेटमा पहुँ च गनर् सक्छु ?
पिरषदले कित पटक बजेट अध्याविधक गदर्छ? िवद्याथीर् को उपलिब्ध मा उनीहरूको अिधक प्रभाव छ भनेर यो रकम कसरी िनगरानी गिरनेछ?
के म CSIP र स्कूल बजेटको िवकासको लािग हालको प्रिक्रयाको
के त्यहाँ पिरषदले बढी सुिचत सम्भव िनणर्यहरू बनाएको सुिनिश्चत गनर्
बारेमा सचेत छु ?
हालको प्रिक्रयामा गनुर्पनेर् केही सुधारहरू छन्?
सम्पकर् गनुर्होस् डा. शावना एल. स्टेनटन स्कूलमा आधािरत िनणर्य गनेर् कायार्लय (SBDM) भान्होज िशक्षा केन्द्र 485-3056 shawna.stenton@jefferson.kyschools.us
अिभभावकको लािग शीषर्क I आफैलाई सोध्नुहोस्
के मेरो बच्चा शीषर्क I स्कूलमा जान्छ?
शीषर्क I स्कूल हुनको लािग के आवश्यकताहरू छन्?
के मलाई शीषर्क I के हो भन्ने थाहा छ?
शीषर्क I स्कूलमा पढ् दा के फाइदा हुन्छ?
के मैले वािषर् क शीषर्क I बैठकमा भाग िलएँ ?
के शीषर्क I को वािषर् क बैठक आयोजना भयो?
के मैले स्कूल कम्प्याक्ट फारम पढें, हस्ताक्षर गरे, र िफतार्
के तपाईंले मेरो बच्चाको साथमा स्कूल कम्प्याक्ट फारम
के मैले शीषर्क I नीित पढें?
के तपाईं शीषर्क I को नीित साझा र व्याख्या गनुर्हुन्छ?
के मेरो बच्चालाई कुनै पिन अितिरक्त िसक्ने अवसरहरूमा
मेरो बच्चाको लािग कस्ता थप िसक्ने अवसरहरू उपलब्ध
भाग िलन आमिन्त्रत गिरएको छ?
के मैले मेरो बच्चाले िसफािरस गिरएको थप िसकाई
मेरो बच्चाले कस्ता थप िसक्ने अवसरहरू प्राप्त गिररहेको
अवसरहरूमा सहभागी हुने कुरा सुिनिश्चत गरेको छु ?
के मलाई मेरो बच्चाले उसको कक्षामा कस्तो गिररहेको छ
के अितिरक्त िशक्षा अवसरहरूले मेरो बच्चाको प्रगितमा
भन्ने थाहा छ?
फरक पािररहेको छ
के म सम्मेलनहरू, सूचना बैठकहरू, र अिभभावक तािलम
घरमा मेरो बच्चालाई मद्दत गनर् म के गनर् सक्छु ?
जस्ता अिभभावकको बैठकहरूमा भाग िलन्थें?
सम्पकर् गनुर्होस् डा. स्ट्यासी एड् लीम्यान िनदेर्शक, शीषर्क I 485-3240 staci.eddleman@jefferson.kyschools.us
अिभभावकको लािग स्वयंसेवा कायर् आफैलाई सोध्नुहोस्
म स्वयंसेवा कायर्को लािग कित समय गनर् समिपर् त गनर् सक्छु ?
तपाईंको स्कूलमा कस्तो प्रकारको स्वयंसेवकको आवश्यकता छ?
के मैले स्कूल स्वयंसेवक रेकडर्को जाँच पूरा गरें?
तपाईको स्कूलमा स्वयंसेवकको रूपमा मैले के आशा गनुर्पछर् ?
स्वयंसेवामा मेरो रुिच व्यक्त गनर् मैले कसलाई सम्पकर् गनुर्पछर् ?
म स्वयंसेवक हुन कित वषर्को हुनुपछर् ?
म कहाँ स्वयंसेवा गनर् चाहन्छु ?
स्वयंसेवा गनर् मलाई कित समय चािहन्छ?
स्वयंसेवाको बारेमा मेरा पुवार्ग्रहहरू के-के हुन्?
मसँग आपरािधक रेकडर् छ, के म अझै पिन स्वयंसेवा गनर् सक्छु ?
के म िवद्याथीर्हरूसँग प्रत्यक्ष सम्पकर् वा अप्रत्यक्ष सम्पकर्मा
के म मेरा साथीहरू र पिरवारलाई मसँग स्वयंसेवा गनर्को लािग
स्वयंसेवा पदमा सबैभन्दा राम्रो सेवा गनर् सक्छु ?
ल्याउन सक्छु ?
के म दीघर्कालीन स्वयंसेवाको िजम्मेवारी िलन प्रितबद्धता गनर्
के मैले स्वयंसेवकको भूिमकाको लािग तािलम पाउनेछु?
सक्छु ? म जेफसर्न काउन्टी पिब्लक स्कूल (JCPS) लाई कसरी उत्तम
के त्यहाँ स्वयंसेवकहरूको लािग कुनै िवशेष आवश्यकताहरू
सेवा िदन सक्छु ?
के म स्वयंसेवा माफर्त अथर्पूणर् योगदान िदन सक्दछु ?
यिद मसँग िवचारहरू वा साझेदारी गनर् सुझावहरू छन् भने मैले कोसँग कुरा गनेर्?
म मेरो स्वयंसेवाको अनुभवबाट के प्राप्त गनर् चाहन्छु ?
सम्पकर् गनुर्होस् अब्दुल शरीफ स्वयंसेवक सामान्य िविवधता, समता, गरीबी कायर्क्रमहरू 485-7046 abdul.sharif2@jefferson.kyschools.us